March 2022 - ShwengweGames
ပရိသတျတှေ မမွငျဖူးသေးတဲ့ ရှငျပွု နားသ အလှူမင်ျဂလာပှဲတုနျးက ပုံရိပျလေးတှကေို အမှတျတရ အနနေဲ့ ပွနျလညျမြှဝလောခဲ့ ခငျဇာခွညျကြျော
March 31, 2022 by Shwengwe Games
ဝါရငျ့သရုပျဆောငျ ခငျဇာခွညျကြျောကတော့ အကယျဒမီဆုပါ ရရှိထားတဲ့ ပရိသတျအခဈြတျော အနုပညာရှငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ခငျဇာခွညျကြျောက ယနအေ့ခြိနျအထိတိုငျအောငျအနုပညာအလုပျတှကေိုတစိုကျမတျမတျလုပျကိုငျနတေဲ့အပွငျသူမရဲ့ကလေးတှကေိုပါ မွေ တောငျမွှောကျပေးနတောဖွဈပါတယျ ။
သားတဈယောကျ၊သမီးတဈယောကျပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ခငျဇာခွညျကြျောက ကလေးတှကေို တာဝနျကပြှေနျစှာ စောငျ့ရှောကျနတော ဖွဈပါတယျ။ခငျဇာခွညျကြျောရဲ့သားကွီး ဘုနျးမငျးနလေနဲ့ သမီးငယျလေးထငျသစ်စာတို့ကလညျး ခဈြမမေရေဲ့အနုပညာအမှတှေကေို ဆကျခံထားတဲ့ မြိုးဆကျသဈအနုပညာရှငျလေးတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ပရိသတျတှကေလညျး ခငျဇာခွညျကြျောနဲ့တကှ သူမရဲ့သားနဲ့သမီးကိုပါ ခဈြခငျအားပေးနကွေတာပဲဖွဈပါတယျ‌နျော။
ပရိသတျတှေ မမွငျဖူးသေးတဲ့ ၃၀. ၃. ၂၀၁၄ ခုနှဈတုနျးက ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ရှငျပွု နားသအလှူမင်ျဂလာ ပုံရိပျလေးတှကေို အမှတျတရ အနနေဲ့ ပွနျလညျမြှဝလောခဲ့တာဘဲဖွဈပါတယျ။
ဖတျရှု့ပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ဘေးအန်တရာယျအပေါငျးမှ ကငျးဝေးပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် ခင်ဇာခြည်ကျော်ကတော့ အကယ်ဒမီဆုပါ ရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အနုပညာရှင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဇာခြည်ကျော်က ယေ န့အချိန်အထိတိုင်အောင်အနုပညာအလုပ်တွေကိုတစိုက်မတ်မတ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အပြင်သူမရဲ့ကလေးတွေကိုပါ မြေ တောင်မြှောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် ။
သားတစ်ယောက်၊သမီးတစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်က ကလေးတွေကိုတာဝန်ကျေပွန်စွာ စောင့်ရှောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဇာခြည်ကျော်ရဲ့သားကြီး ဘုန်းမင်းနေလနဲ့ သမီးငယ်လေးထင်သစ္စာတို့ကလည်းချစ်မေမေရဲ့အနုပညာအမွေတွေကိုဆက်ခံထားတဲ့ မျိုးဆက်သစ်အနုပညာရှင်လေးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်း ခင်ဇာခြည်ကျော်နဲ့တကွ သူမရဲ့သားနဲ့သမီးကိုပါ ချစ်ခင်အားပေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်‌နော်။
ပရိသတ်တွေ မမြင်ဖူးသေးတဲ့ ၃၀. ၃. ၂၀၁၄ ခုနှစ်တုန်းက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရှင်ပြု နားသ အလှူမင်္ဂလာ ပုံရိပ်လေးတွေကို အမှတ်တရ အနေနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေလာခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖတ်ရှု့ပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဘေး အန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းဝေးပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မဟာဝိဇိယ စတေီတျောမွတျကွီး ရှသေင်ျကနျးကပျလှူ ပူဇျောနိုငျဖို့ ပါဝငျလှူဒါနျးခဲ့တဲ့ ခိုငျသငျးကွညျ
ပရိသတျကွီးရေ ခိုငျသငျးကွညျကတော့ ဒီနမေ့တျလ (၃၁)ရကျနမှေ့ာမှနျမွတျလှတဲ့ ရှသေင်ျကနျးကပျအလှူလေးတဈခုကိုပွု လုပျခဲ့ပါတယျ။ခိုငျသငျးကွညျကတော့ အလှူအတနျးတှကေိုရကျရောစှာနဲ့လှူဒါနျးလရှေိ့တဲ့သူတဈယောကျဖွဈပွီးလတျတ လောမှာတော့အပတျစဉျကွာသပတေးနတေို့ငျးကောငျးမှုတဈခုကိုနစေ့ဉျပွုလုပျနတောပဲဖွဈပါတယျ။
ခိုငျသငျးကွညျကတော့ဒီနေ့ မတျလ (၃၁)ရကျနလေ့ေးမှာဆိုရငျလညျး မိဘနှဈပါးနဲ့အတူ မဟာဝိဇိယဘုရားကို သှား ရောကျကာကုသိုလျကောငျးမှုတှပွေုလုပျခဲ့တဲ့အပွငျ မဟာဝိဇိယဘုရားကွီး ရှသေင်ျကနျးကပျလှူဒါနျးမှုမှာပါဝငျလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။ရှသေင်ျကနျးကပျလှူပူဇျောနိုငျဖို့ အလှူတဈသိနျးကပျြကိုသဒ်ဓါတရားထကျ သနျစှာနဲ့ကို လှူဒါနျးပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ခိုငျသငျးကွညျကတော့ သူ့ရဲ့My Day ကနလေညျးမိဘတှနေဲ့ကုသိုလျကောငျးမှုတှပွေုလုပျခဲ့ကွောငျးနဲ့ ရှသေင်ျကနျးကပျလှူတဲ့အလှူလေးပွုလုပျခဲ့ကွောငျးကို မြှ ဝဖေျောပွထားခဲ့ပါတယျ။ပရိသတျကွီးရေ ဆုတောငျးပွညျ့တနျခိုးကွီးဘုရားကို ရှသေင်ျကနျးကပျလှူရတဲ့ကုသိုလျကတော့ တကယျကိုမှနျမွတျလှတဲ့ကုသိုလျပါပဲနျော။
ပရိသတ်ကြီးရေ ခိုင်သင်းကြည်ကတော့ ဒီနေ့မတ်လ (၃၁)ရက်နေ့မှာမွန်မြတ်လှတဲ့ ရွှေသင်္ကန်းကပ်အလှူလေးတစ်ခုကိုပြု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခိုင်သင်းကြည်ကတော့ အလှူအတန်းတွေကိုရက်ရောစွာနဲ့လှူဒါန်းလေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလတ်တ လောမှာတော့အပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းကောင်းမှုတစ်ခုကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခိုင်သင်းကြည်ကတော့ဒီနေ့ မတ်လ (၃၁)ရက်နေ့လေးမှာဆိုရင်လည်း မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူ မဟာဝိဇိယဘုရားကို သွား ရောက်ကာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် မဟာဝိဇိယဘုရားကြီး ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူဒါန်းမှုမှာပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်နိုင်ဖို့ အလှူတစ်သိန်းကျပ်ကိုသဒ္ဓါတရားထက် သန်စွာနဲ့ကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခိုင်သင်းကြည်ကတော့ သူ့ရဲ့My Day ကနေလည်းမိဘတွေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူတဲ့အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကို မျှ ဝေဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေ ဆုတောင်းပြည့်တန်ခိုးကြီးဘုရားကို ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူရတဲ့ကုသိုလ်ကတော့ တကယ်ကိုမွန်မြတ်လှတဲ့ကုသိုလ်ပါပဲနော်။
တိလေးတှေ အစာကြှေးရနျ အတှကျ တဈသိနျးကပျြကို လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ မအေးသောငျး
အေးခမျြးပွီး ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အလှတရားတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေို အမွဲအခဈြပို ဖမျးစားထားတဲ့ ပွညျသူ့အခဈြတျောလေးကတော့ သရုပျဆောငျမငျးသမီးခြောလေး အေးဝတျရညျသောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
မိနျးကလေးဆနျဆနျ စှဲမကျဖှယျကောငျးတဲ့ Body အမိုကျစားလေးကို ပိုငျဆိုငျထားသူလေး ဖွဈတာကွောငျ့ မိနျးကလေးအမြားစုရဲ့ အားကခြွငျးကို ခံနရေသူလေးလညျးဖွဈပါတယျ။
တဈခတျေတဈခါကတညျးက နာမညျကြျောကွား လူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ မငျးသမီးခြောလေးဖွဈပွီး ယနတေို့ငျ အောငျမွငျမှုရရှိနတေဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။
ပီပွငျတဲ့ သရုပျဆောငျမှုသာမက မွနျမာဆနျဆနျ အမွဲဝတျတတျတဲ့ သူမရဲ့ ယဉျယဉျလေး ဖကျရှငျကမြှုကွောငျ့လညျး ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို အခိုငျအမာ ရထားသူလေးပါနျော ။
တိလေးတှခေဈြတတျပွီး အလှူအတနျးဆိုလညျး ရကျရကျရောရောလှူဒါနျး တတျတဲ့ မအေးသောငျးကတော့ဒီနမှေ့ာ တိလေးတှအေတှကျ လှူဒါနျးခဲ့ပါသေးတယျ။
“တိလေး တှေ အတှကျ အခုလို လှူရတဲ့အကြိုးအားကွောငျ့ မ Aye Thaung အပြိုကွီး ဘဝ အမွနျဆုံး ကြှတျပါစေ😂မောငျလေး မောငျလေး မလုပျတော့ပဲ စိတျတှလေဲ အ​မွနျဆုံး​တညျငွိမျပါစေ😂”
ဒီထကျမက လှူနိုငျတနျးနိုငျ ပေးကမျးစှံကြဲနိုငျ ပီးသကျရှညျကနျြးမာ တဲ့အောငျမွငျတဲ့ သူဌေးမကွီး ဖွဈပါစေ😍အမှတျတယ💕 အလှူလေး မို့ save လိုကျပါတယျ 💖လို့ တငျထားပါတယျ။မအေးသောငျးရဲ့ တိလေးတှခေဈြပွီး လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ အလှူလေးကိုသာဓုချေါဆိုခဲ့ပါဦးနျော
Source Eingyinn May Tun, Aye Thaung
အေးချမ်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို အမြဲအချစ်ပို ဖမ်းစားထားတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော်လေးကတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး အေးဝတ်ရည်သောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးဆန်ဆန် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ Body အမိုက်စားလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေး ဖြစ်တာကြောင့် မိန်းကလေးအများစုရဲ့ အားကျခြင်းကို ခံနေရသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခေတ်တစ်ခါကတည်းက နာမည်ကျော်ကြား လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေးဖြစ်ပြီး ယနေ့တိုင် အောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုသာမက မြန်မာဆန်ဆန် အမြဲဝတ်တတ်တဲ့ သူမရဲ့ ယဉ်ယဉ်လေး ဖက်ရှင်ကျမှုကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရထားသူလေးပါနော် ။
တိလေးတွေချစ်တတ်ပြီး အလှူအတန်းဆိုလည်း ရက်ရက်ရောရောလှူဒါန်း တတ်တဲ့ မအေးသောင်းကတော့ဒီနေ့မှာ တိလေးတွေအတွက် လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။
“တိလေး တွေ အတွက် အခုလို လှူရတဲ့အကျိုးအားကြောင့် မ Aye Thaung အပျိုကြီး ဘဝ အမြန်ဆုံး ကျွတ်ပါစေ😂မောင်လေး မောင်လေး မလုပ်တော့ပဲ စိတ်တွေလဲ အ​မြန်ဆုံး​တည်ငြိမ်ပါစေ😂”
ဒီထက်မက လှူနိုင်တန်းနိုင် ပေးကမ်းစွံကျဲနိုင် ပီးသက်ရှည်ကျန်းမာ တဲ့အောင်မြင်တဲ့ သူဌေးမကြီး ဖြစ်ပါစေ😍အမှတ်တယ💕 အလှူလေး မို့ save လိုက်ပါတယ် 💖လို့ တင်ထားပါတယ်။မအေးသောင်းရဲ့ တိလေးတွေချစ်ပြီး လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အလှူလေးကိုသာဓုခေါ်ဆိုခဲ့ပါဦးနော်
Source Eingyinn May Tun , Aye Thaung
မင်ျဂလာဆောငျ ဓာတျပုံတှကေို တရားဝငျထုတျပွနျခဲ့တဲ့ Hyun Bin နဲ့ Son Ye Jin
Hyun Bin နဲ့ Son Ye Jin တို့ရဲ့မင်ျဂလာဆောငျ ဓာတျပုံတှကေိုကွညျ့ရှုလို့ရပါပွီ။
မတျလ (၃၁) ရကျနမှေ့ာ သရုပျဆောငျနှဈဦးရဲ့အဂေငျြစီဖွဈတဲ့ VAST Entertainment နဲ့ MSTeam တို့ဟာ “သရုပျဆောငျနှဈဦးဖွဈကွတဲ့ Son Ye Jin နဲ့ Hyun Bin တို့ဟာ ဒီကနမှေ့ာလကျထပျပှဲကငျြးပခဲ့ပွီး မင်ျဂလာမောငျနှံအဖွဈ ခွလှေမျးသဈကို အစပွုခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။
မင်ျဂလာပှဲကိုတော့ COVID-19 အခွအေနတှေကွေောငျ့ အကဉျြးခြုံးမြှသာပွုလုပျခဲ့ပွီး ဒီအခကျြကိုလညျး နားလညျပေးကွဖို့ တောငျးဆိုအပျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ဒီသတငျးကို သူတို့မင်ျဂလာဆောငျဓာတျပုံတှနေဲ့ မြှဝလေိုကျပါတယျ။” လို့ ရေးသားထားခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပွငျလညျး “ဒီလိုသဈလှနျတဲ့ခရီးလမျးအစမှာ ထောကျပံ့အားပေးပွီး ခဈြခွငျးမတ်ေတာပို့သပေးကွလို့ ကြေးဇူးတငျရပါတယျ။ ဒီလိုရရှိတဲ့မတ်ေတာတှကေို ပွနျလညျပေးအပျနိုငျဖို့လညျး သရုပျဆောငျ Hyun Bin နဲ့ Son Ye Jin တို့နဲ့အတူ ဒီအဂေငျြစီတှကေလညျး အစှမျးကုနျကွိုးစားသှားပါမယျလို့ ပွောကွားလိုပါတယျ။” လို့ဆိုခဲ့ပါသေးတယျ။လှပတဲ့မင်ျဂလာဆောငျဓာတျပုံတှကေို အောကျမှာရှုစားကွညျ့ကွပါ။
သူတို့နှဈဦးဟာ ၂၀၁၈ ဇာတျကား “The Negotiation” နဲ့ ၂၀၁၉ Drama “Crash Landing on You” တို့မှာ အတူပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ကွပွီး သူတို့ခဈြသူတှဖွေဈနကွေောငျးကိုတော့ ၂၀၂၁ ဇနျနဝါရီလထဲမှာ အတညျပွုပွောကွားခဲ့ကွသူတှပေါ။
ဒီနှဈဖဖေျောဝါရီလမှာတော့ သူတို့မင်ျဂလာပှဲကို ကွညောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူတို့နှဈဦးလုံးကို ဂုဏျပွုကွောငျးပွောကွားလိုပါတယျ
Hyun Bin နဲ့ Son Ye Jin တို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင် ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရှုလို့ရပါပြီ။
မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့မှာ သရုပ်ဆောင်နှစ်ဦးရဲ့အေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ VAST Entertainment နဲ့ MSTeam တို့ဟာ “သရုပ်ဆောင်နှစ်ဦးဖြစ်ကြတဲ့ Son Ye Jin နဲ့ Hyun Bin တို့ဟာ ဒီကနေ့မှာလက်ထပ်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီး မင်္ဂလာမောင်နှံအဖြစ် ခြေလှမ်းသစ်ကို အစပြုခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပွဲကိုတော့ COVID-19 အခြေအနေတွေကြောင့် အကျဉ်းချုံးမျှသာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဒီအချက်ကိုလည်း နားလည်ပေးကြဖို့ တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီသတင်းကို သူတို့မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။” လို့ ရေးသားထားခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင်လည်း “ဒီလိုသစ်လွန်တဲ့ခရီးလမ်းအစမှာ ထောက်ပံ့အားပေးပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာပို့သပေးကြလို့ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ ဒီလိုရရှိတဲ့မေတ္တာတွေကို ပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ဖို့လည်း သရုပ်ဆောင် Hyun Bin နဲ့ Son Ye Jin တို့နဲ့အတူ ဒီအေဂျင်စီတွေကလည်း အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။” လို့ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးဟာ ၂၀၁၈ ဇာတ်ကား “The Negotiation” နဲ့ ၂၀၁၉ Drama “Crash Landing on You” တို့မှာ အတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး သူတို့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြောင်းကိုတော့ ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလထဲမှာ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ကြသူတွေပါ။
ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ သူတို့မင်္ဂလာပွဲကို ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးလုံးကို ဂုဏ်ပြုကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်
သရုပျဆောငျအလုပျကနေ ‘အနားယူသှားဖို့’ ရှိနတေဲ့ မငျးသားကွီး Bruce Willis
မငျးသားကွီး Bruce Willis ဟာ Aphasia ဖွဈကွောငျး ဆေးစဈခကျြထှကျရှိလာလို့ သရုပျဆောငျအလုပျကနေ ‘အနားယူသှားဖို့’ ရှိနပေါတယျ။
Aphasia ဟာဆိုရငျတော့ အပွောအဆို၊ ဘာသာစကားနဲ့ပတျသကျတဲ့ မူမမှနျရောဂါဖွဈပွီး ဒီရောဂါရှိနကွေောငျး ဆေးစဈခကျြထှကျရှိခဲ့တဲ့ မငျးသားကွီး Bruce Willis အနနေဲ့ သရုပျဆောငျအလုပျတှကေနေ “အနားယူသှားဖို့” ရှိနပေါတယျ။
ဒီရောဂါလက်ခဏာရှိသူတှဟော ဆိုလိုရငျးရောကျအောငျ စကားပွောဆိုရခကျခဲတာ၊ အခွားသူရဲ့စကားတှကေို နားမလညျနိုငျတာမြိုးတှေ ဖွဈပှားလရှေိ့ပွီး အရေးပိုငျးမှာလညျး အလားတူပွဿနာတှေ ကွုံတှရေ့တတျကွောငျး သိရပါတယျ။
“ကြှနျမတို့ခဈြခငျရတဲ့ Bruce ဟာ ကနျြးမာရေးအခွအေနဆေိုးတဈခုနဲ့ ကွုံတှနေ့ရေပွီး Aphasia ဝဒေနာကို ခံစားနရေပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူ့ရဲ့သိမှုဆိုငျရာစှမျးရညျတှေ ထိခိုကျနပေါတယျ။
ဒီလိုအခွအေနတှေကွေောငျ့ Bruce ဟာ သူခဈြခငျတနျဖိုးထားရတဲ့ သရုပျဆောငျအလုပျကနေ အနားယူသှားဖို့ရှိနပေါတယျ။” လို့ Demi Moore နဲ့မှေးဖှားခဲ့တဲ့သမီးတဈဦးဖွဈသူ Rumer Willis က သူ့အကောငျ့မှာ ပွောကွားခဲ့တာပါ။
“ဒီအခွအေနကေ ကြှနျမတို့မိသားစုအတှကျ ခကျခဲတဲ့အခွအေနတေဈခုဖွဈပွီး မိသားစုတှစေညျးစညျးလုံးလုံးနဲ့ ကြျောဖွတျသှားဖို့ လုပျဆောငျနပေါတယျ” လို့လညျး ထညျ့သှငျးပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဒီပို့ဈကိုတော့ သူ့ဇနီးဖွဈသူ Emma Heming Willis နဲ့အတူ သူတို့ရဲ့သမီးနှဈဦး Mabel နဲ့ Evelyn အပွငျ သူ့ဇနီးဟောငျးဖွဈသူ Moore နဲ့ သူတို့ရဲ့သမီးသုံးဦး Rumer၊ Scout နဲ့ Tallulah၊ စတဲ့ မိသားစုဝငျအကုနျလုံးက လကျမှတျရေးထိုးထားကွပါတယျ။
မင်းသားကြီး Bruce Willis ဟာ Aphasia ဖြစ်ကြောင်း ဆေးစစ်ချက်ထွက်ရှိလာလို့ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကနေ ‘အနားယူသွားဖို့’ ရှိနေပါတယ်။
Aphasia ဟာဆိုရင်တော့ အပြောအဆို၊ ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မူမမှန်ရောဂါဖြစ်ပြီး ဒီရောဂါရှိနေကြောင်း ဆေးစစ်ချက်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး Bruce Willis အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်အလုပ်တွေကနေ “အနားယူသွားဖို့” ရှိနေပါတယ်။
ဒီရောဂါလက္ခဏာရှိသူတွေဟာ ဆိုလိုရင်းရောက်အောင် စကားပြောဆိုရခက်ခဲတာ၊ အခြားသူရဲ့စကားတွေကို နားမလည်နိုင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး အရေးပိုင်းမှာလည်း အလားတူပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
“ကျွန်မတို့ချစ်ခင်ရတဲ့ Bruce ဟာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးတစ်ခုနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပြီး Aphasia ဝေဒနာကို ခံစားနေရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ရဲ့သိမှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေ ထိခိုက်နေပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့် Bruce ဟာ သူချစ်ခင်တန်ဖိုးထားရတဲ့ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကနေ အနားယူသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။” လို့ Demi Moore နဲ့မွေးဖွားခဲ့တဲ့သမီးတစ်ဦးဖြစ်သူ Rumer Willis က သူ့အကောင့်မှာ ပြောကြားခဲ့တာပါ။
“ဒီအခြေအနေက ကျွန်မတို့မိသားစုအတွက် ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီး မိသားစုတွေစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ကျော်ဖြတ်သွားဖို့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်” လို့လည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကိုတော့ သူ့ဇနီးဖြစ်သူ Emma Heming Willis နဲ့အတူ သူတို့ရဲ့သမီးနှစ်ဦး Mabel နဲ့ Evelyn အပြင် သူ့ဇနီးဟောင်းဖြစ်သူ Moore နဲ့ သူတို့ရဲ့သမီးသုံးဦး Rumer၊ Scout နဲ့ Tallulah၊ စတဲ့ မိသားစုဝင်အကုန်လုံးက လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြပါတယ်။
ပြျောရှငျစရာမကောငျးတဲ့ အခြိနျမှာကရြောကျတဲ့ မှေးနဖွေ့ဈသျောလညျး အကောငျးဆုံးမှေးနလေ့ကျဆောငျလေး ရရှိခဲ့လို့ ကနြေပျပါနတေဲ့ အိမျ့ခဈြ
နာမညျကွီးအဆိုတျော ခဈြကောငျးရဲ့သမီးလေးဖွဈတဲ့ အဆိုတျောအိမျ့ခဈြကတော့ ဆယျကြျောသကျအရှယျကတညျးက ဂီတလောကကို ဝငျရောကျလာသူ တဈဦးဖွဈပွီး ဖခငျဖွဈသူရဲ့ ဂီတအမှကေို အပွညျ့အဝ ဆကျခံရရှိထားတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ အသံလေးကလညျး နားဆငျသူတိုငျးရဲ့ ရငျထဲထိရောကျသှားအောငျကို အသံပါဝါအားကောငျးလှနျးတာပါ ။သီခငျြးကောငျးလေးတှေ ဖနျတီးတတျပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျောလေးဖွဈနတေဲ့ သူမက လူငယျပရိသတျတှကွေား ရပေနျးစားကြျောကွားနတေဲ့ အမြိုးသမီး အဆိုတျောမလေးတဈဦးပါ ။
လကျရှိမှာတော့ အိမျ့ခဈြက သူမအရမျးခဈြရတဲ့ ခဈြသူနဲ့အတူတူ ရှလေကျတှဲကာ သာယာပြျောရှငျစရာ မိသားစု ဘဝလေးကို ဖွတျသနျးနတောဖွဈပါတယျ။အခုလညျး သူမရဲ့ မှေးနလေ့ေးမှာ မကွာခငျလူလောကထဲ ရောကျလာတော့မယျ့ သမီးလေးနဲ့ ပတျသကျပွီး အမှတျတရ ပုံလေးတှနေဲ့အတူ
” Happy Birthday To Me 🌸 ဒီနှဈမှေးနလေ့ေးကတော့ဗိုကျထဲမှာ မီးမီးလေးနဲ့ပေါ့ ပြျောရှငျစရာမကောငျးတဲ့အခြိနျမှာကရြောကျတဲ့ မှေးနမှေ့ာသမီးလေးရှိနပွေီဆိုတဲ့အတှေးလေးနဲ့တော့ ကနြေပျပြျောရှငျရတယျမမေသေ့မီးလေးရေ မမေရေဲ့ကိုယျပှါးလေးဖွဈလာမယျ့သမီးလေးက မမေအေ့တှကျအကောငျးဆုံးမှေးနလေ့ကျဆောငျလေးပါပဲ
မမေရေဲ့မှေးနဆေု့တောငျးလေးကလဲ သမီးလေး ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့မှေးဖှားလာဖို့ပါပဲ 👧” ဆိုတဲ့ စာလေးကို ရေးသား ဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီး အတှကျ ပွနျလညျဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ ။
Photo – Eaint Chit
နာမည်ကြီးအဆိုတော် ချစ်ကောင်းရဲ့သမီးလေးဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်အိမ့်ချစ်ကတော့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက ဂီတလောကကို ဝင်ရောက်လာသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ဂီတအမွေကို အပြည့်အဝ ဆက်ခံရရှိထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အသံလေးကလည်း နားဆင်သူတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲထိရောက်သွားအောင်ကို အသံပါဝါအားကောင်းလွန်းတာပါ ။သီချင်းကောင်းလေးတွေ ဖန်တီးတတ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်လေးဖြစ်နေတဲ့ သူမက လူငယ်ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားကျော်ကြားနေတဲ့ အမျိုးသမီး အဆိုတော်မလေးတစ်ဦးပါ ။
လက်ရှိမှာတော့ အိမ့်ချစ်က သူမအရမ်းချစ်ရတဲ့ ချစ်သူနဲ့အတူတူ ရွှေလက်တွဲကာ သာယာပျော်ရွှင်စရာ မိသားစု ဘဝလေးကို ဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်း သူမရဲ့ မွေးနေ့လေးမှာ မကြာခင်လူလောကထဲ ရောက်လာတော့မယ့် သမီးလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရ ပုံလေးတွေနဲ့အတူ
” Happy Birthday To Me 🌸 ဒီနှစ်မွေးနေ့လေးကတော့ဗိုက်ထဲမှာ မီးမီးလေးနဲ့ပေါ့ ပျော်ရွှင်စရာမကောင်းတဲ့အချိန်မှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့မှာသမီးလေးရှိနေပြီဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့တော့ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ရတယ်မေမေ့သမီးလေးရေ မေမေ့ရဲ့ကိုယ်ပွါးလေးဖြစ်လာမယ့်သမီးလေးက မေမေ့အတွက်အကောင်းဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင်လေးပါပဲ
မေမေ့ရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးကလဲ သမီးလေး ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့မွေးဖွားလာဖို့ပါပဲ 👧” ဆိုတဲ့ စာလေးကို ရေးသား ဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖကျရှငျလေးနဲ့ လူငယျဆနျဆနျ နုပြိုလှပ နတေဲ့ မငျးသမီးခြောလေး မိုးဟကေို
ပရိသတျကွီးရေ လကျရှိမှာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ထိပျတနျး မငျးသမီးတှထေဲကတဈဦးအပါအဝငျဖွဈတဲ့မိုးဟကေိုကတော့ သရုပျ ဆောငျပိုငျးမှာသာမက ဖကျရှငျပိုငျးမှာပါ ငေးယူရလောကျအောငျ ပိုငျနိုငျလှနျးလှပါတယျ။
ပှဲအခမျးအနားတှလေညျး တကျရောကျလရှေိ့တဲ့ မိုးဟကေိုကတော့ အခြိုးအစားကနြပွီးလှပလှနျးတဲ့ ကိုယျခန်ဓာလေးနဲ့ လိုကျဖကျညီစှာ ဝတျစားတတျတဲ့ ဖကျရှငျပုံလေးတှကေလညျးအမြားနဲ့မတူ ထူးခွားစှာနဲ့ ခမျးနားပျေါလှငျနခေဲ့ပါတယျ။
သူမရဲ့အနုပညာလှုပျရှားမှုပုံရိပျမြားကို လူမှုကှနျယကျစာ မကျြနှာပျေါတှငျ ဖျောပွလရှေိ့တာတှရေ့ပါတယျ။လတျတလောမှာလညျးမိုးရဲ့ လူငယျဆနျဆနျ နုပြို လှပနတေဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေိုလညျးမိုးကို ခဈြတဲ့ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
ဖတျရှု့ပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ဘေးအန်တရာယျ အပေါငျးမှ ကငျးဝေးပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
Photo – MoeHayKo
ပရိသတ်ကြီးရေ လက်ရှိမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်း မင်းသမီးတွေထဲက တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ မိုးဟေကိုကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာသာမက ဖက်ရှင်ပိုင်းမှာပါ ငေးယူရလောက်အောင် ပိုင်နိုင်လွန်းလှပါတယ်။
ပွဲအခမ်းအနားတွေလည်း တက်ရောက်လေ့ရှိတဲ့ မိုးဟေကိုကတော့ အချိုးအစားကျနပြီးလှပလွန်းတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ လိုက်ဖက်ညီစွာ ဝတ်စားတတ်တဲ့ ဖက်ရှင်ပုံလေးတွေကလည်းအများနဲ့မတူ ထူး ခြားစွာနဲ့ ခမ်းနားပေါ်လွင်နေခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြလေ့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။လတ်တလောမှာလည်းမိုးရဲ့ လူငယ်ဆန်ဆန် နုပျို လှပနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းမိုးကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဖတ်ရှု့ပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဘေးအန္တရာယ် အပေါင်းမှ ကင်းဝေးပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကလေးလေးတဈယောကျလိုဖွူစငျတဲ့အပွုံးလေးတှနေဲ့အတူ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ပို့ဈလေးတှပေေးကာ ပရိသတျတှရေဲ့အသညျးကိုခွှခေလြိုကျပွနျတဲ့ ဆောငျးဝတျရညျမေ”
ပရိသတျကွီးရေ ဆောငျးဝတျ ရညျမကေတော့ ဇာတျကားတိုငျးလိုလို ကရြာဇာတျရုပျကိုပီပွငျအောငျသရုပျ ဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးတဈလကျဆိုလညျး မမှားလောကျပါဘူးနျော။
ဆောငျးဝတျရညျမလေေးကတော့ ဇာတျလမျးတှဲတှသောမက ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှမှောလညျး ပါဝငျလာကာ အောငျမွငျမှုလမျးကွောငျးပျေါရောကျရှိနတေဲ့ မငျးသမီးတဈလကျလိုဆိုနိုငျနပေါပွီနျော။
တုတုလေးကတော့ လှတျလှတျလပျလပျနဲ့ ပေါ့ပေ့ါပါးပါး နထေိုငျတတျတဲ့အမူအကငျြ့လေးနဲ့ အပွုံးခြိုခြိုလေးတှကွေောငျ့ ပရိသတျတျောတျောမြားမြားရဲ့ အားပေးဝနျးရံမှုကိုရရှိလာတာပဲဖွဈပါတယျ။
သူမြားနဲ့မတူတဲ့ ခဈြစရာစကားပွောပုံလေးနဲ့အတူ ဆောငျးဝတျရညျမကေတော့ ကိုရီးယားမငျးသမီးလေးအတိုငျး ဘာခှဲစိတျပွုပွငျမှုမှမလုပျဘဲ ခြောမောလှပနတေဲ့ မငျးသမီးလေးပါပဲ။
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အပွုံး နဲ့ ထူးထူးခွားခွား စကားပွောပုံလေးတှကေ ယောကျြားလေးပရိသတျတှသောမက မိနျးကလေးပရိသတျတှကေတောငျ ခဈြခငျ အားပေးရသူလေး လို ဆိုရမှာပါ။
သူမရဲ့ လှုပျရှားမှုမြားကိုပရိသတျကွီးကို အမွဲမြှဝပေေးလကျြရှိသူလညျးဖွဈပါတယျ။ဒီနမှေ့ာလညျး ဆောငျးဝတျရညျမကေ🤍 မငျးကိုပဲ အဖွူစငျဆုံးခဈြမယျ 🤍🤍ကိုယျ့ကိုယျလညျး အဖွူစငျဆုံးခဈြပေး🤍ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့အတူ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပုံလေးတှကေိုတငျလာတာဖွဈပါတယျနျော။
ဆောငျးဝတျရညျမရေဲ့ပုံတိုငျးက အဖွူရောငျဝတျစုံလေးဝတျဆငျထားပွီး ကလေးလေးတဈယောကျလိုဖွူစငျတဲ့အပွုံးလေးတှနေဲ့အတူ ခဈြစရာကောငျးလှနျးနတောကွောငျ့ ပွနျ လညျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။ ပရိသတျကွီးကလညျး ဆောငျးဝတျရညျမရေဲ့ပုံရိပျလေးတှကေိုကွညျ့ကာပြျောရှငျကွညျနူးမိမယျထငျပါတယျ။
ပရိသတ်ကြီးရေ ဆောင်းဝတ် ရည်မေကတော့ ဇာတ်ကားတိုင်းလိုလို ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်အောင်သရုပ် ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးချောလေးတစ်လက်ဆိုလည်း မမှားလောက်ပါဘူးနော်။
ဆောင်းဝတ်ရည်မေလေးကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေသာမက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း ပါဝင်လာကာ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိနေတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်လိုဆိုနိုင်နေပါပြီနော်။
တုတုလေးကတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ပေါ့ပေ့ါပါးပါး နေထိုင်တတ်တဲ့အမူအကျင့်လေးနဲ့ အပြုံးချိုချိုလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တော်တော်များများရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကိုရရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူများနဲ့မတူတဲ့ ချစ်စရာစကားပြောပုံလေးနဲ့အတူ ဆောင်းဝတ်ရည်မေကတော့ ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးအတိုင်း ဘာခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုမှမလုပ်ဘဲ ချောမောလှပနေတဲ့ မင်းသမီးလေးပါပဲ။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံး နဲ့ ထူးထူးခြားခြား စကားပြောပုံလေးတွေက ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေသာမက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကတောင် ချစ်ခင် အားပေးရသူလေး လို ဆိုရမှာပါ။
သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုများကိုပရိသတ်ကြီးကို အမြဲမျှဝေပေးလျက်ရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာလည်း ဆောင်းဝတ်ရည်မေက🤍 မင်းကိုပဲ အဖြူစင်ဆုံးချစ်မယ် 🤍🤍ကိုယ့်ကိုယ်လည်း အဖြူစင်ဆုံးချစ်ပေး🤍ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့အတူ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေကိုတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဆောင်းဝတ်ရည်မေရဲ့ပုံတိုင်းက အဖြူရောင်ဝတ်စုံလေးဝတ်ဆင်ထားပြီး ကလေးလေးတစ်ယောက်လိုဖြူစင်တဲ့အပြုံးလေးတွေနဲ့အတူ ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတာကြောင့် ပြန် လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း ဆောင်းဝတ်ရည်မေရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ကာပျော်ရွှင်ကြည်နူးမိမယ်ထင်ပါတယ်။
ကှယျလှနျသူ ဖခငျကွီးအားရညျစူးပွီး ကောငျးမှု ကုသိုလျမြားစှာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ လငျးအောငျခတျေ
ခဈြပရိသတျကွီးရေ ဆယျကြျောသကျ ကောငျမလေးတှေ အသညျးစှဲ မငျးသားခြောလေး ဖွဈတဲ့ လငျးအောငျခတျေကတော့ သူ့ရဲ့ အေးခမျြးပွီး ယောကျြားဆနျတဲ့ အပွုံးလေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေို ဆှဲဆောငျထားနိုငျသူဖွဈပါတယျ။
မိနျးကလေးပရိသတျတှေ အမြားဆုံး အားပေးရရှိသူဖွဈသလိုတကယျ့ကို ဖျော ရှပွေီးရညျမှနျတဲ့ လငျးအောငျခတျေကိုအနုပညာရှငျအခငျြးခငျြးလညျး ခဈြ ခငျခွငျးကိုခံရသူဖွဈပါတယျ။
သူရဲ့ ဖျောရှပှေငျ့လငျး စှာနတေတျတဲ့ပုံစံလေးကွောငျ့ ပရိသတျအခဈြတျောကို ခံယူရရှိနတေဲ့သူတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ လငျးအောငျခတျေက ခုကာလမှာလညျး ခကျခဲနတေဲ့ ပွညျသူတှကေို အလှူလေးတှနေဲ့ တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ တဈတပျတဈအား အကူအညီပေးနတေဲ့ မငျးသားတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ ။
အခုမှာတော့ လငျးအောငျခတျေက ဖခငျကွီး ကှယျလှနျတာ (၈)လပွညျ့ကို ရညျစူးပွီး အလှူ အတနျးမြားစှာကို ပွုလုပျဖွဈခဲ့ကွောငျး ဝမြှေလာပါတယျ ။
အလှူပုံတှနေဲ့အတူ ” အဖနေဲ့ ခှဲရတာ ၈ လပွညျ့သှားပွီ… အမွဲသတိရနပေါတယျ အဖေ ..အမွဲတမျးလဲ ရညျစူးပွီး ကုသိုလျ ကောငျးမှုကုသိုလျတှလေဲ လုပျပေးဖွဈလို့ ရောကျရာ အရပျမှ သာဓုချေါနိုငျပါစေ…🙏🏻” ဆိုတဲ့ စာလေးကို ရေးသားဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီး အတှကျ ပွနျလညျဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ ။
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေးတွေ အသည်းစွဲ မင်းသားချောလေး ဖြစ်တဲ့ လင်းအောင်ခေတ်ကတော့ သူ့ရဲ့ အေးချမ်းပြီး ယောကျာ်းဆန်တဲ့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးပရိသတ်တွေ အများဆုံး အားပေးရရှိသူဖြစ်သလိုတကယ့်ကို ဖော် ရွေပြီးရည်မွန်တဲ့ လင်းအောင်ခေတ်ကိုအနုပညာရှင်အချင်းချင်းလည်း ချစ် ခင်ခြင်းကိုခံရသူဖြစ်ပါတယ်။
သူရဲ့ ဖော်ရွေပွင့်လင်း စွာနေတတ်တဲ့ပုံစံလေးကြောင့် ပရိသတ်အချစ်တော်ကို ခံယူရရှိနေတဲ့သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လင်းအောင်ခေတ်က ခုကာလမှာလည်း ခက်ခဲနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို အလှူလေးတွေနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ တစ်တပ်တစ်အား အကူအညီပေးနေတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုမှာတော့ လင်းအောင်ခေတ်က ဖခင်ကြီး ကွယ်လွန်တာ (၈)လပြည့်ကို ရည်စူးပြီး အလှူ အတန်းများစွာကို ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဝေမျှလာပါတယ် ။
အလှူပုံတွေနဲ့အတူ ” အဖေနဲ့ ခွဲရတာ ၈ လပြည့်သွားပြီ… အမြဲသတိရနေပါတယ် အဖေ ..အမြဲတမ်းလဲ ရည်စူးပြီး ကုသိုလ် ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလဲ လုပ်ပေးဖြစ်လို့ ရောက်ရာ အရပ်မှ သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေ…🙏🏻” ဆိုတဲ့ စာလေးကို ရေးသားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဒုတိယမွောကျ solo album လေး ပွီးစီးပွီဖွဈသျောလညျး ပရိသတျတှေ စိတျရော ကိုယျပါ အဆငျသငျ့ဖွဈတဲ့အခြိနျရောကျမှ ဖွနျ့ခြီတော့မယျဆိုတဲ့ အဆိုတျော ဖွိုးပွညျ့စုံ
ပရိသတျကွီးရေ ဖွိုးပွညျ့စုံကတော့အသံအေးအေးခြိုခြိုလေးနဲ့ပရိသတျရငျထဲကို ရောကျရှိခဲ့ပွီး အမြိုးသားအမြိုးသမီးမရှေးသဘောကကြွတဲ့ အဆိုတျောတဈလကျပါ။ ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးခဈြခငျမှုကိုအပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။
သီခငျြးကောငျးလေးတှကေိုဖနျတီးရငျးဖြျောဖွပှေဲတှကေိုမနားမနဖြေျောဖွပေေးနခေဲ့ရတဲ့အထိကိုအောငျမွငျမှုတှေ တဈပှေ့ တဈပိုကျရရှိပိုငျဆိုငျထားတဲ့အနုပညာရှငျတှထေဲမှာဖွိုးပွညျ့စုံကတဈယောကျအနနေဲ့အပါအဝငျပဲဖွဈပါတယျ
သီခငျြးအသဈအသဈတှမြေားစှာဖနျတီးသီဆိုတတျတဲ့ ဖွိုးပွညျ့စုံကတော့လကျရှိဒီနမှေ့ာတော့လှနျခဲ့တဲ့၎နှဈလောကျထဲက စတငျကွိုးစားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဒုတိယမွောကျ အယျဘမျလေးပွီးစီးသှားကွောငျးကို”2018 လောကျ ထဲက စတငျရညျရှယျ ခဲ့တဲ့ ကနြေျာ့ 2nd solo album အိမျမကျလေးကနြေျာ့ရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ အမြားကွီးထညျ့ပိုးထားတဲ့ ဂီတ သကျတမျး ၇နှဈ အတှငျးမှာမှ ဒုတိယမွောကျ album လေးပါ..။
လေးစား ရတဲ့ ဆရာခဈြ တို့ရဲ့ အကွံဉာဏျကောငျးတှေ အားတှေ တေးရေးကောငျးတှေ ကွောငျ့အားရှိခဲ့ရသလို album ထှကျခဲ့ရငျ ဆိုပီး တှေးလိုကျတိုငျး ပီတီ နဲ့ ပြျောပါတယျ …အခုတော့နားဆငျပေးမယျ့ audience တှေ စိတျရော ကိုယျပါ အဆငျသငျ့ဖွဈမှ သီခငျြးအသဈ ထှကျခငျြတော့တာမို့လောလောဆယျတော့ ကနြေျာ့ နှလုံးသားအိတျကပျထဲပဲ ပွနျထညျ့သိမျးထားလိုကျပါတယျ
အခု post လေး shareတာကတော့လောသမြှ စိတျရော နှလုံးသားပါ ထညျ့ပီး ပါဝငျပေးတဲ့ ဆရာခဈြ , iron cross music band နဲ့ တေးရေး မြား ပါဝငျသီဆိုပေးသူအားလုံး ကိုလေးစားကြေးဇူးတငျကွောငျး ဒီစာလေးနဲ့ မှတျတမျးတငျခငျြတာပါ…
album name က “ အဖွူရောငျကားခပျြ”အားလုံး ကိုယျရော စိတျပါ အေးခမျြးကွပါစေ 🙏🏼”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ကြေးဇူးတငျစကားပွောကာ ပရိသတျတှကေိုလညျးအသိပေးလာခဲ့တာပါ။
ပရိသတျတှလေညျး ဖွိုးပွညျ့စုံရဲ့ဒုတိယ‌မွောကျအယျဘမျကို မြှျောလငျ့စောငျ့စားနကွေတယျဆိုရငျမှတျခကျြပေးခဲ့ကွပါဦးနျော။
ပရိသတ်ကြီးရေ ဖြိုးပြည့်စုံကတော့အသံအေးအေးချိုချိုလေးနဲ့ပရိသတ်ရင်ထဲကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အမျိုးသားအမျိုးသမီးမရွေးသဘောကျကြတဲ့ အဆိုတော်တစ်လက်ပါ။ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းကောင်းလေးတွေကိုဖန်တီးရင်းဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုမနားမနေဖျော်ဖြေပေးနေခဲ့ရတဲ့အထိကိုအောင်မြင်မှုတွေ တစ်ပွေ့ တစ်ပိုက်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အနုပညာရှင်တွေထဲမှာဖြိုးပြည့်စုံကတစ်ယောက်အနေနဲ့အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်
သီချင်းအသစ်အသစ်တွေများစွာဖန်တီးသီဆိုတတ်တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံကတော့လက်ရှိဒီနေ့မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့၎နှစ်လောက်ထဲက စတင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက် အယ်ဘမ်လေးပြီးစီးသွားကြောင်းကို”2018 လောက် ထဲက စတင်ရည်ရွယ် ခဲ့တဲ့ ကျနော့် 2nd solo album အိမ်မက်လေးကျနော့်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အများကြီးထည့်ပိုးထားတဲ့ ဂီတ သက်တမ်း ၇နှစ် အတွင်းမှာမှ ဒုတိယမြောက် album လေးပါ..။
လေးစား ရတဲ့ ဆရာချစ် တို့ရဲ့ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေ အားတွေ တေးရေးကောင်းတွေ ကြောင့်အားရှိခဲ့ရသလို album ထွက်ခဲ့ရင် ဆိုပီး တွေးလိုက်တိုင်း ပီတီ နဲ့ ပျော်ပါတယ် …အခုတော့နားဆင်ပေးမယ့် audience တွေ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ အဆင်သင့်ဖြစ်မှ သီချင်းအသစ် ထွက်ချင်တော့တာမို့လောလောဆယ်တော့ ကျနော့် နှလုံးသားအိတ်ကပ်ထဲပဲ ပြန်ထည့်သိမ်းထားလိုက်ပါတယ် …
အခု post လေး shareတာကေတာ့လောသမျှ စိတ်ရော နှလုံးသားပါ ထည့်ပီး ပါဝင်ပေးတဲ့ ဆရာချစ် , iron cross music band နဲ့ တေးရေး များ ပါဝင်သီဆိုပေးသူအားလုံး ကိုလေးစားကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဒီစာလေးနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ချင်တာပါ…
album name က “ အဖြူရောင်ကားချပ်”အားလုံး ကိုယ်ရော စိတ်ပါ အေးချမ်းကြပါစေ 🙏🏼”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကာ ပရိသတ်တွေကိုလည်းအသိပေးလာခဲ့တာပါ။
ပရိသတ်တွေလည်း ဖြိုးပြည့်စုံရဲ့ဒုတိယ‌မြောက်အယ်ဘမ်ကို မျှော်လင့်စောင့်စားနေကြတယ်ဆိုရင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။